Ardey ka badan intii hore oo ku guuleeysta imtixaanka dugsiyada sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardey gaari saaran ee u xafladeeneysa dhammeeys-tirka dugsiyada sare. sawir: Johan Nilsson/TT
Ardey ka badan intii hore oo ku guuleeysta imtixaanka dugsiyada sare
La daabacay torsdag 21 december 2017 kl 15.35
Saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey ayey kor u kaceen tirada dhallin-yarada ardeyda ee ku guuleeysata iney qaataan shahaadada dugsiyada sare, isla-markaana suurtagalka u yeelata iney jaamicadaha u gudbaan, sida ku cad war-bixin ay soo saartay wakaaladda iskuulladu khamiista maanta.
Isu geeyn tirada kor u kacday ayaa gaarsii-san 3,8%. Gugii 2014 ayey dugsiyada sare ku guuleeysteen iney ka natiijo gaaraan ardey gaarsii-san 71,4% ee ardeydii ku qorneyd barnaamijyadii dugsiyada sare, midkaasina oo haddii loo barbar-dhigo ardeyda ka qalin jebisey noocyada kala duwan ee barnaamijyada qaran ee dugsiyada sare sannadka 2017 kor u gaartay 75,2%.
Kor u kaca ugu wayn ee is-bedellada ayaa ka muuqda barnaamijyada dugsiyada sare ee xirfadaha lagu barto. Sannadkii 2014 waxaa qeybaha xirfadaha shahaado ka qaatey 66,6% ardeydii dhiganeeysey, tiradaasina oo kor u gaartay 71,8%.